Iyo nyowani vhezheni yeNmap 7.92 yakatoburitswa uye idzi ndidzo nhau dzayo | Linux Vakapindwa muropa
ari Nmap vagadziri vachangobva kuzivisa kuburitswa kweshanduro nyowani 7.92 uye ndiko kuti kuvhurwa kweNmap 7.92 kwakarongerwa kuenderana nemusangano weDEFCON 2021 (wakaitika kubva Nyamavhuvhu 5 kusvika 8). Iyi vhezheni nyowani inouya nemhando dzakasiyana dzekuvandudza uye kunyanya nezvitsva zvinyorwa, kodhi yekuvandudza uye nezvimwe.
Hi shamwari. Vazhinji vedu hatikwanise kuenda kuDefcon tiri pachedu gore rino nekuda kwedenda, asi hatizorega izvozvo zvichimisa yedu yechinyakare Defcon Nmap kuvhurwa! Isu tangoburitsa Nmap 7.92 uye inosanganisira gumi nemaviri ekuvandudza mashandiro, zvinowedzeredzwa, uye gadziriso dzebug dzatakaita pamusoro pemwedzi gumi yadarika.
1 Main nyowani maficha eNmap 7.92
2 Maitiro ekuisa Nmap 7.92 paLinux?
Main nyowani maficha eNmap 7.92
Mune iyi vhezheni itsva iyo inoburitswa yeNmap 7.92 Npcap raibhurari kugona kwagadziriswa kutora uye kutsiva mapaketi mu Windows. Raibhurari iri kuvandudzwa seinotsiva WinPcap, yakavakwa uchishandisa yazvino Windows NDIS 6 LWF API, uye inoratidza kuita kuri nani, chengetedzo, uye kuvimbika.
Iine iyo Npcap yekuvandudza, Nmap 7.92 inopa rutsigiro rweWindows 10 pane maARM-based systemkusanganisira Microsoft Surface Pro X uye Samsung Galaxy Book G. Tsigiro yeWinPcap raibhurari yamiswa, pamwe nemaWindows anovaka akashandurwa kuti ashandise Visual Studio 2019, Windows 10 SDK, uye UCRT. Yakabviswa rutsigiro rweWindows Vista uye shanduro dzekare.
Imwe yeshanduko inomira mushanduro nyowani ndeyekutie yakavandudza kunyatso kwe UDP zvikumbiro zvekuyedza (UDP payload, protocol yakatarwa zvikumbiro zvinopindura panzvimbo pekuregeredza UDP paketi) secheki nyowani dzakawedzerwa: TS3INIT1 yeUDP chiteshi 3389 uye DTLS yeUDP 3391.
kunze kwaizvozvo kodhi yacho yakashandurwa kuti ifanane nemitauro yeSBB2 protocol uye kumhanya kweiyo smb-protocol script kwakagadziridzwa. Shanduro dzeSMB protocol dzinoenderana neMicrosoft zvinyorwa (3.0.2 pachinzvimbo cha3.02).
Kune rimwe divi zvinotaurwa kuti muNmap 7.92 mazhinji ezvinyorwa zveNSE akawedzera rutsigiro rweTLS 1.3. Kuti ushandise epamberi maficha senge SSL tunneling uye chitupa kuongorora, zvirinani OpenSSL 1.1.1 inodiwa.
Wakawedzera "-unique" sarudzo yekudzivirira kutarisisa iyo imwechete IP kero kakawanda kana akasiyana mazita mazita akasarudza kune imwechete IP.
3 matsva eNSE zvinyorwa zvaverengerwa kugadzirisa zviito zvakasiyana neNmap:
nbns-interfaces kuti uwane ruzivo nezve IP kero ye network network nekutaurirana neNBNS (NetBIOS Name Service).
kuvhura-info yeruzivo pane yakatsigirwa OpenFlow protocols.
chiteshi-nyika kunyora network yemachiteshi padanho rega rega rechokwadi, kusanganisira mhedzisiro ye "Hazviratidzwe: X zviteshi zvakavharwa."
Masiginecha matsva akawedzerwa kuti aone mashandisiro enetiweki uye masisitimu anoshanda.
Finalmente kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvazvo nezve iyi vhezheni nyowani, unogona kutarisa izvo zvinyorwa mu chinotevera chinongedzo.
Maitiro ekuisa Nmap 7.92 paLinux?
Muchiitiko chekuparadzirwa nerutsigiro rweRPM mapakeji, vanogona kuisa iyo Nmap 7.90 package nekuvhura terminal uye nekuita inotevera mirairo:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Iyo nyowani vhezheni yeNmap 7.92 yakatoburitswa uye idzi ndidzo nhau dzayo